Dadka Yurubta ah: Inta badan madaxweynuhu wuxuu joojiyaa ololaha "illaa ogeysiis dheeraad ah" - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Yurubta: aqlabiyadda madaxweynenimada ayaa hakisay olole" illaa iyo ogaysiis dheeraad ah "
Madaxa ra'iisul wasaaraha Nathalie Loiseau ayaa Talaadadii ku dhawaaqay in la ganaaxay ololihiisa "Ilaa ogeysiis dheeraad ah", maalin ka dib dabkii burburiyay kakooban ee Notre-Dame de Paris.
"Waxaan ku noolnahay waqti aad u murugo badan. Liiska Renaissance ayaa si dabiici ah uga dhex muuqda xilligan midnimada qaranka "ayuu yiri Ms. Loiseau oo Twitter ah.
Safarka Marseille ayaa dib loo dhigay
"Dhaqdhaqaaqyada colisters maanta waa la joojiyay maanta, shirweynaha guud ee dadweynaha ee la qorsheeyay Khamiista Marseille ayaa dib loo dhigayaa", ayuu yiri ilo LREM. Dhowr xubnood oo ka tirsan xukuumadda ayaa laga filayay kulankaan oo ku yaala Marseille.
Sidoo kale dabka ayaa sidoo kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jamhuuriyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Emmanuel Macron, ayaa Isniintii dib u dhigey khudbadiisa ku saabsan soo saarista doodda weyn ee uu siinayay saacadaha 20.
Sidoo kale Dibad baxa Qaranka
Dhinaciisa ayaa sidoo kale Isbahaysiga Qaranka wuxuu ku dhawaaqay in ay joojisay ololaheeda doorashooyinka Yurub "Ilaa laga hadlo xiga" Emmanuel Macron.
MEP iyo xubin ka mid ah xubin ka tirsan Isbahaysiga Qaranka, Nicolas Bay, ayaa ku dhawaaqay "Ugu yaraan saacadaha 24 ee xabbad-joojinta dagaalka siyaasadeed iyo ololaha doorashooyinka sababta oo ah waxaan nahay (...) barooran dahab ah hannaanka qaranka".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.nicematin.com/politique/europeennes-la-majorite-presidentielle-suspend-sa-campagne-jusqua-nouvel-ordre-375865
Wasiirka Paul Atanga Nji ayaa la filayaa Arbacada maxkamada sare ee Mfoundi